Health Sarokar | खानपान
जाडोमा यसरी पिउनुस चिया, शरिरलाई फाइदा हुन्छ
जाडो मौसममा चिया पिउनेको संख्या अवश्य पनि बढ्ने गर्दछ । चिसोमा चिया पिउनेहरुले स्वस्थ चियाको विकल्प रोज्नु नै उत्तम रहन्छ । सादा चियाको सट्टा अदुवा र ल्वाङ राखेर चिया पिउने...
Omega3fatty acid: The trendy medicine among Nepali population
Neutraceuticals business is now gaining momentum in Nepal in the recent years. It even caught controversy in the recent days in Nepal when decisions were made that neutraceuticals should not...
बियरले बढी हानी गर्छ कि वाइनले ?
एजेन्सी । सन् १९८० को सुरुवातमै अनुसन्धानकर्ताहरुले फ्रान्समा, स्याचुरेटेड फ्याट र कोलेस्ट्रोलयुक्त अधिक खाना सेवन गरिएपनि मुटु सम्बन्धी रोग र अकाल मृत्युको दर अनुमान गरिए भन्दा धेरै कम रहेको पत्ता...
काठमाडौँ । आयुर्वेदका अनुसार पाकेको मेवाको सेवनले पित्तको शमन हुन्छ र भोजनप्रति रुचि उत्पन्न हुन्छ । मेवामा ‘पपेन’ नाउँ गरेको पदार्थ पाइन्छ । यसलाई धेरै राम्रो पाचक मानिन्छ । मेवाको रसले प्रोटिनलाई सजिलै...
क्यान्सरका लागि मदिरा वा धुम्रपान कुन बढी हानिकारक ?
एजेन्सी– एक हप्तामा ७५० मिलीलिटर मदिरा सेवनबाट क्यान्सरको खतरा जति हुन्छ, त्यति नै खतरा एक हप्तामा दश सिगरेट पिउने महिला र पाँच सिगरेट पिउने पुरुषमा हुने गर्छ । बेलायतमा हालै क्यान्सरका लागि...
बागुङ । बागलुङ सदरमुकामस्थित विद्यामन्दिर बालविकास केन्द्रलाई सिद्धार्थ बैंक बागलुङले आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बालविकास केन्द्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नगद रु २०...
बाँसको तामा खानुहोस्, क्यान्सर तथा मुटु रोगबाट बच्नुहोस्
काठमाडौ । बाँसको तामा धेरैलाई मनपर्ने तरकारी हो । यसको अचार बनाएर खादा उतिनै मिठो हुन्छ । यो स्वादका लागि मात्र नभएर स्वास्थका लागि पनि धेरै फाइदा जनक मानिन्छ। तामाबाट...
मुटुरोग तथा क्यान्सरबाट बच्न गाजरको सेवन गरौ
काठमाडौं । गाजर प्राय सबै मानिसहरु मन पर्छ । गाजरकोे सलाद काटेरे, हलुवा बनाएर, जुस बनाएर खान सकिन्छ। गाजर जुनै मौसममा पनि पाईने वनस्पति हो यसमा अत्याधिक भिटामिन र मिनरलको...
आफ्नो शरिरलाई फिट अर्थात् तन्दुरुस्त राख्ने चाहना हरेक मानिसहरुमा हुन्छ । तर आफ्नो शरीरलाई फिट बनाउने चाहना पूरा गर्नका लागि सबै जना सफल भएका भने हुदैनन् ।त्यसका लागि हामी जे...
स्वादिष्ट मटरको खीर बनाउने तरिका
काठमाडौं । मटरको पनि खीर बनाउन मिल्छभन्ने सुन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्छ होला । यो निकै स्वादिष्ट हुन्छ र बनाउन पनि सजिलो छ । यहाँ हामी यसको रेसिपी बनाउन सिकाउनेछौं ।...